हेल्सेको रेडियो,(युवराज नयाँघरे)
टाइम्स स्क्वाएरमा बसिरहन पाइएन । <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
'आज रातभरिमा तीन-चार कार्यक्रम नबनाई भएकै छैन !' सहदेवले भने ।
मे महिनाको सुरुको साता । एकदमै मीठो मौसम छ । जाडो भाग्न खोजेको उज्यालो कालबेला । हिउँ नपर्ने हार्दिक याम छ न्युयोर्कमा । हामी उत्तरतिर पाइला सार्दैछौँ ।
छयालिस स्ट्रीट पुग्यौँ । कारका लस्कर छन् आँखाले नभ्याउने । मान्छेको हुल झन् उत्पातको छ छ ।
अनलाइन रेडियो 'हिमाली स्वरहरु' अमेरिकामा प्रसिद्ध छ यो । धेरै वर्ष भो यसले अमेरिकाली समाजमा नेपाली भावना सोच र परिचयका लागि समय खर्चेको ।
'यति ब्यस्त ठाउँमा कसरी मिलाउनु हुन्छ चाँजोपाँजो? ' मेरो सोधपुछ ।
'पुर्याउनु पर्छ । कम सुत्छु । अनि रेडियो बचाउन सकेको छु !'
मित्रहरुले बाह् इन्च लामो पाउरोटीमा मासु, सागपात, अनेक मसला र काँक्रा-गाजर कोचेर टुन्न फुलाएको 'सब हातमा थमाए ।
'दाइलाई न्युयोर्कको चौरासी व्यन्जन यही हो !' भट्टले मलाई मान गरे ।
खड्काले अमेरिकन डाइट मलाई थमाउँदै भने-'ओपसानी हाल्न यै जल प्रयोग गर्नु होला !'
अनि हामी सबै उही र उस्तै परिकारको स्वादमा रमाउँदै प्राइम पार्क पुग्यौँ । न्युयोर्कको सुन्दरता झन् उत्ताउलिएको थियो न्युयोर्कको बैँस झन् आलोकमय थियो न्युयोर्कको यौवन झन् आसक्तिपूर्ण थियो । मानिस मौसम र मन उस्तै लाग्थे, उही लाग्थे र उनै लाग्थे ।
स्नेही थिए सहदेव । आदर, प्रेम र श्रद्धा गर्न तिनी तत्पर भए झैँ मैले ठानेँ । शिष्टता र सरलता तिनको अमेरिकी समाजले दिएको उपहार झैँ व्यवहार थियो । हिँडिरहेका थियौँ हामी ।
जाडो लुगलुगाउँदो थियो । तैपनि अमेरिकाली गोरी युवतीका पिडुँला ह्वाङ्गै थिए । जाडो दाँत कटकटाउँदै थियो । तैपनि अफ्रिकाली अश्वेत सुन्दरीका बज्राँठ तिघ्रा उदाङ्गै थिए । हो, तिनका कान, कपाल र टाउकामा स्कार्फ, टोपी र रुमालको सजधज चैँ घटेको थिएन ।
'भाइ बहाना त विद्याआर्जन नै होला नि अमेरिका भित्रिने ' भट्टलाई मेरो प्रश्न ।
'हो त्यही बाटो भएर अमेरिका आइयो । अहिले त्यो लक्ष्य कता पुग्यो, यतिखेर चैँ हातमा काम मात्र छ ।' उनको उत्तर सुनेँ ।
जिउ हल्लाई हल्लाई गफ गरिरहेको अश्वेतहरुको ठूलो हुल थियो ।
'भनेपछि राजनीतिमा पोल्टिक्स्…………।!' मेरो उत्तर अन्तिम थियो त्यसले सबैलाई हँसायो ।
भट्ट छुटे । हामीले 'भी' मेट्रो चढ्न केही समय कुर्यौँ । भीड एकदम थियो । तैपनि रेल छोडेनौँ हामी तीनले ।
'याँ निकै नेपालीहरुको अनुहार भेटिन्छ । भेट्नु भएन ? ' टङ्कले भर् याङ झर्दा भने मलाई ।
मैले कालो कपाल नेपाली वर्णका पहाडे जनजातिका रुपरङ्ग हिस्पानिकहरुको झुण्ड खुब देखिरहेथेँ । अझ रुपौला नारीको सङ्ख्या झन् उल्काको । हन के बिदी राम्रा यी !
भारतीय, हिस्पानिक, कोरियाली र अश्वेत अनुहारका युवायुवतीको रौस उल्कापातको थियो मेट्रोमा । युवकका बलिष्ठ छातीमा आफ्ना सुडौल शरीर लिपिस्सै टाँसेर नाँचिरहेका हिस्पानिकहरु 'अमिगो' 'अमिगा' बोल्न पनि भ्याउँथे ।
'भाइ, हिमाली स्वरहरुलाई खुराक कसरी जुटाउनु हुन्छ ?' मेट्रोबाट हेल्सेमा उत्रिएपछि मैले प्रश्न राखेँ ।
मेट्रो कार्ड घोटेर बाहिर आएपछि भाइ बोले 'इमेल बाहेक विकल्प छैन !'
'भनेपछि सबथोक यै भाँडो हो '
मैले खड्काले बोकेको ल्यापटप देखाएँ । उनी त्यसकै सहायताले ज्योतिषीको काम चिनाटिपनको काम गर्थे । भाग्य हेर्ने र ग्रहशान्तिको फुकफाक गर्थे खड्का । यसो मोडमा हामीले सोडा घुड्कायौँ ।
'यहाँ नेपालीहरुको ठूलो उपस्थिति छ ।'
'सङ्ख्या कति छ '
'हिमाली स्वरहरु मार्फत् मैले पनि सघाइरा'छु !'
रातको एघार बज्यो-घर पस्दा । मधुरो बत्तीमुनि हिमाली स्वरहरुका निम्ति मेरा दुईवटा निबन्ध सहदेवले रेकर्ड गरे मेरै आवाजमा । बाँधिएका हात र भोटेताल्चा एकादेशमा हाम्रा अनुहार रेकर्ड गरियो अनलाइन रेडियोकालागि ।
सहदेव भाइ नेपाली शब्दको प्रचारमा छन् । नेपाली भाव प्रसारमा अहोरात्र लागिपरेका छन् । नेपाली समाजको उकाली ओह्राली बिस्तार गर्न खटेका छन् । त्यस महानगरका अभावमा डलरको जोहोभन्दा पहिचानको प्राप्तिका निम्ति समर्पित छन् निरन्तर ।
'भाइ रेडियोको अझै भविष्य छ र ?' रातोदिन कुदिरहेका न्युयोर्कबासी सम्झेर मैले सोधेँ ।
'दाइ मानिसहरु बिस्तारै फर्किरहेका छन् यसको मूल्यतिर !'
उनको आशपूर्ण बोलीमा प्रतिबद्धता थियो ।
यस बीचमा पुलिस र दमकलको भ्यान चर्को आवाज ओकलेर गए । हामी एक छिन थामियौँ रेकर्डलाई बाधा परेको ठानी ।
निकै लामो त्यस उत्तेजित भावुक र अनुभूतिमय यात्रामा तिनले बढी प्रश्नहरु गरे साहित्यबारे । सङ्गीतबारे जिज्ञासु देखिए । गीतबारे उत्तर खोजे । नयाँ पुस्तक र लेखक सँधै तिनको केरकारमा पर्दा रहेछन् ।
'मैले देश छोडेकोमा दुःखी छैन । यसै रेडियोले देशभित्र रहेको आडभरोसा मलाई सँधै दिलाउँछ बुझ्नुभो दाइ !'
न्युयोर्कको रात अझ मात्तिएको थियो । यो शहर नथाकेको देखेर म आफैँ गलेको थिएँ । उसको तरुन्याइँ देखेर उकुसमुकुस भएथ्यो मलाई । ओछ्यानमा भए नि मन पुगेथ्यो धेरै पर-पर ।